Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana ao Jamaika dia nitombo 330.7%
Vaovao Mafana • Karaiba • culinary • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Mirongatra ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana ao Jamaika
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nandray ny tarehimarika nambaran'ny Ivon-toerana momba ny drafitra ao Jamaika (PIOJ) omaly, izay manondro fitomboana lehibe eo amin'ny sehatry ny Hotely sy ny fisakafoanana. Nanambara ny PIOJ fa nitombo 12.9% ny toekarena nandritra ny telovolana hatramin'ny volana jona 2021 raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ny indostrian'ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny dia nandray anjara betsaka tamin'io, miaraka amin'ny ambaratonga fitomboan'ny fampiasam-bolan'ny hotely sy ny fahatongavan'ireo mpitsidika iraisam-pirenena.
Ny indostrian'ny Hotely sy ny trano fisakafoanana dia nanoratra ny haavon'ny fisondrotana avo indrindra amin'ny sokajy indostrian'ny serivisy miaraka amin'ny fitomboana 330.7%.
Ny indostrian'ny serivisy dia nitombo 14% tamin'ny telovolana hatramin'ny jona noho ny fiakaran'ny vidin'ny mpitsidika.
Ho an'ny volana aprily - mey 2021, mpitsidika nijanona dia miisa 205,224 XNUMX ny mpitsidika.
Araka ny angon-drakitra navoakan'ny PIOJ, ny indostrian'ny Hotely sy ny Fisakafoanana dia nandrakitra ny haavon'ny fisondrotana avo indrindra amin'ny sokajy indostrian'ny serivisy, izay nitombo 330.7%. Amin'ny ankapobeny, ny indostrian'ny serivisy dia nitombo 14% tamin'ny telovolana hatramin'ny jona noho ny fiakaran'ny vidin'ny mpitsidika raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana tamin'ny taon-dasa, rehefa nakatona ny sisintany.
Mampiseho ireo tarehimarika fa ho an'ny volana aprily - mey 2021 ny fahatongavan'ireo nijanona tampoka dia mpitsidika 205,224 2020 izay tsy nisy na iray aza nandritra ny vanim-potoana nitovy tamin'ny taona XNUMX.
Ny minisitra Bartlett, faly tamin'ny tatitra, dia nilaza fa "ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia anisan'ny tena voa mafy tamin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Raha ny marina dia nijanona tanteraka izy io ary nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny toekarentsika. Tena reharehako ny fandrosoana vitantsika mba hiverenana, sy ny fiatraikany tsara teo amin'ny toekarentsika, ary ny fanitarana ny mponin'i Jamaika. ”
"Ny fitomboan'ny 330.7% amin'ny sehatry ny hôtely dia tsy zava-bita kely ary vokatry ny asa mafy napetraky ny Minisiteran'ny Fizahan-tany sy ireo mpiara-miombon'antoka amintsika hamoronana tontolo azo antoka ho an'ireo mpiasa ao amin'ny indostria ary koa ireo mpitsidika anay. Ny bubble izay noforoninay tao anatin'ny Travel Resilient Corridors, izay nahazo fankatoavana manerantany momba ny fahombiazany sy ny fanavaozana azy dia azo ekena ihany koa. Sehatra fizahantany ao Jamaika mitohy mitombo amin'ny maha-indostria izay tsy vitan'ny hoe manambola fa azo antoka, milamina ary azo antoka, "hoy ihany izy.
Ny minisitra koa dia namolavola fitomboana nitohy tamin'ny telovolana manaraka, toy ny vao tsy ela izay fanokafana indray ny indostrian'ny fitsangantsanganana vinavinaina hisy fiantraikany lehibe amin'ny toekarena.
“Mandroso haingana izahay amin'ny fametrahana ny fototra ho an'ny fanarenana tanteraka ny sehatry ny fizahan-tany ao Jamaika, amin'ny fomba azo antoka sy tompon'andraikitra. Tsy ho lalana mora io raha mizotra amin'ny ho avy tsy ampoizina isika, fa, amin'ny fotoana maharitra, hanana sehatry ny fizahan-tany azo antoka kokoa isika ary hampiorina kokoa ho an'ireo mpiasa, mpitsidika ary mpiara-miasa aminy, "hoy i Bartlett.
Ny Institute Institute of Jamaica (PIOJ) dia masoivohon'ny minisiteran'ny Vola sy ny asam-panjakana (MOFPS). Io ny masoivohon'ny drafitra lehibe indrindra amin'ny governemanta izay mikasa ny manomboka sy mandrindra ny fampandrosoana ny politika, ny drafitra ary ny programa ho fampandrosoana maharitra an'i Jamaika. Niorina manokana izy io hanamafisana ny fahaizan'ny governemanta mandamina.